सीमामा यसरी ढलेका छन जङ्गे खम्बा, सिंहदरबारसम्म यो समाचार पु-याउन सेयर गरौँ -
काठमाडौँ । नेपाल भारत सीमामा जङ्गे सीमाखम्बा ढलेका छन । नेपालको तर्फबाट ती खम्बा उठाउने र संरक्षण गर्नेमा ध्यान नपुगेको भन्दै विरोध भइरहेको छ । सीमाविद्हरुले यसको आवाज उठाइरहेका छन । सिमाबिद बुद्धिनारायण श्रेष्ठले आफ्नो फेसबुकमा यसरी स्टाटस लेखेका छन ।
ढाल्यो, डुब्न लाग्यो, ढल्न लाग्यो– लाग्यो–लाग्यो, ढल्नै लाग्यो
खबरदार जंगे सीमाखम्बा नढलोस् ।खम्बा नढले हाम्रा पालामा नसके पनि हाम्रा छोरा नातिले सीमा रक्षा गर्नेछन् ।सीमा खम्बा ढले देशै खतम हुन्छ ।कपिलवस्तु ठिकुरापुरस्थित चिरई खोलको बाढीले बगाएको ५७८ र ७ को मूल सीमा खम्बा ।भारतीय महलिसागर ब्यारेजले डुबानमा पारेको ९१० नम्बरको जङ्गे खम्बा ।ढल्केको जंगे खम्बा नं. ३३७ सर्लाही बलरा गाउ‘पालिका–४ नयॉटोला फूलवरिया गाउको हो ।
Read More….किन खानुहुँदैन साउनमा माछामासु ? यस्तो छ वैज्ञानिक कारण ।
साउन महिना, धार्मिक आस्था राख्नेहरुका लागि विशेष महिना । यो महिनामा केही धार्मिक पर्वहरु पनि पर्छ । यो साउने संक्रान्तिको महिना हो । यो बोलबमको महिना हो । भगवान शिवको आरधानाको महिना हो । उपवासको महिना हो । पूर्विय दर्शन अनुसार साउन महिनामा भगवान शिवको आरधना गर्ने, उपवास बस्ने, शिवलिंगमा जल अर्पण गर्ने गरिन्छ । धार्मिक मान्यता के छ भने, साउनको सोमवार व्रत बस्ने र शिवलिंगमा जल चढाउनाले घरमा सुख समृद्धि मिल्छ ।
साउन महिना, जो मध्य बर्षायामसँगै जोडिएर आउँछ । असारको चटारो सक्न नभ्याउँदै साउन महिना आउँछ । यतिबेला खेती किसानी गर्नेहरुले बालीनाली लगाएर विश्राम लिने बेला हुन्छ । तपाई, हामीलाई थाहै छ, हाम्रो देश कृषिमा आधारित छन् । धेरैजसो जन-जीविका खेतीपातीबाटै धानिएको छ ।खेतीको कुरा जोड्नुको अर्थ के भने, साउन महिना किसान बर्गका लागि पनि विशेष हो । खेतीपातीको चटारोबाट विश्राम लिएर मनलाई धर्मकर्ममा लगाउने बेला हो यो । धार्मिक आस्थाको रुपमा मात्र होइन, हाम्रो जीवन पद्धतीसँग जोडिएका कुरा हुन् यी ।
सुस्तावासीको सरकारलाई आग्रह: हामीलाई पनि समेट नयाँ नक्सामा
ऐश्वर्य’ले नयाँ फर्नि’चरहरू किन्न सुझाव दिँदा राजा बिरेन्द्रले भने,…
लकडाउनका कारण लाखौंको तरकारी सडेर गयो, कृषक मर्कामा
को’रोनाको महा’मारी लक’डाउनको चपेटामा जनता : २५ जेठभित्र कर बुझाउन…
नेपालमा संविधान संशोधन विधेयक पेस भएपछि भारतीय मिडियामा ह’ल्लीख’ल्ली !